कमल थापाले क्रा’न्तिको मालिक तपाईहरु होइन विदेशी शक्ति हो भनेपछि रन्किए बाबुराम ! – yuwa Awaj
कमल थापाले क्रा’न्तिको मालिक तपाईहरु होइन विदेशी शक्ति हो भनेपछि रन्किए बाबुराम !
कार्तिक २७, २०७७ बिहिबार 8
काठमाडौं : राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईबीच सामाजिक सञ्जालमा आ’रोप–प्र’त्यारोप परेको छ । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा र जनता समाजवादी पार्टी,
नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईबीच सामाजिक सञ्जालमा आ’रोप–प्रत्या’रोप चलेको हो। लोकतन्त्रकै मान्यताको परिधिभित्र रहने संवैधानिक राजसंस्था कायम गर्न सकिन्छ भन्दै राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेको आलेख माथि टिप्पणी गर्दै भट्टराईले
गणतन्त्र,संघीयता,धर्मनिरपेक्षतालाई विदेशी षड्यन्त्र भनिएको प्रति आप’त्ति जनाएका छन्। डा. भट्टराईले आफ्ना सहपाठीसमेत रहेका राप्रपा अध्यक्ष थापाले नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा ‘अब घडीको सुई पछाढि फर्काउन सकिन्न’ शीर्षकमा लेखेको आलेखमाथि टिप्पणी गर्दै लेखेका छन् ।
मेरा सहपाठी मित्र ले ग्वेबल्सको दुष्प्रचार-सूत्र ’झुटोलाई सय चोटि दो¥होर्याए पछि सत्य बन्छ’ को अनुशरण गर्दै पुन: गणतन्त्र,संघीयता,धर्मनिरपेक्षतालाई विदेशी षड्यन्त्र भनेछन्! क्रान्तिका अगुवा प्रचण्ड-बाबुरामहरू जिउॅदो छॅदै यस्तो झुट बोल्नु ‘देख्नेको अगाडि सुन्नेको सही’भएन र?”
बाबुरामको उक्त ट्वीट पश्चात अध्यक्ष थापाले नेपालका क्रान्तिको शुरुवात प्रचण्ड-बाबुरामले गरेको भएपनि त्यसको मालिक विदेशी शक्ति रहेको स्पष्ट भइरहेको बताएका छन्।
भट्टराईलाई जवाफ फर्काउँदै थापाले पनि लेखेका छन्,‘फेरी हसाउनु भयो सहपाठी मित्र ले।कति हास्नु हौ!क्रान्तिको’भारी’ नेपालमा तपाईहरूले बोकेर ल्याएको हो।त्यसमा कुनै विरोध छैन।तर,त्यो भारीको मालिक तपाईहरू होईन,शुरूमा हो कि भनेर सबैले पत्याएका पनि थिए।तर,जव सक्क्ली मालिकले भारिको दावि गरेपछि त्यसमा तपाईले बालहठ नदेखाएकै बेश ।
Prevराजसंस्था पुर्नस्थापनाको माग गर्दै विराटनगरमा प्रदर्शन !
Nextअर्थमन्त्रीको अर्को राम्रो कदम – अब सरकारी कार्यालयले नयाँ गाडी किन्न नपाउने…हेर्नुहोस् ।
सरकार परिवर्तन र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा सुरु !